ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး နှင့် လုံမလေး မွန်မွန် ၏ ပဟေဠိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး နှင့် လုံမလေး မွန်မွန် ၏ ပဟေဠိ
ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး နှင့် လုံမလေး မွန်မွန် ၏ ပဟေဠိ
Posted by Mahar Myanmar on Sep 23, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 22 comments
ကျုပ် ဆို တာ က …အသင် မဟုတ်ဘူး လေ…ဒါကြောင့်…ဘာ မှ မတူ နိုင်ပေဘူး ကိုး ဗျ..အခု .. ကျုပ် ရွာ ထဲ ကို သူကြီး မသိအောင် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ပတ် မွှေ လိုက် တာ အခု တော့ အနီးစပ်ဆုံး ၁၁ ယောက် စာရင်း ထွက်လာပါ့ လား … အဲဒီ စာရင်းကို အခု ရဲ လက် အဲ လေ…ဒေါ်ကြီးလုံ လက်ထက် အခု လို ပို့စ်တင်ပြီး အပ်လိုက်ပါတယ် ဗျာ.. ပွိုင့် တိုး ဖို့ ပို့စ်တင် တယ် ပြောပြော…တကယ် တော့ အဲဒီလိုပါ…တဂျီး ကို မွဲဆေး ဖေါ် ပေး နေတာ ပါ…ကျုပ် ပွိုင့် က ၈၀၀၀ ကျော် ရပြီ နော်..အဲဒါ အပေါင် ထား ပြီး၅၀၀၀ လောက် ဘယ်သူ ချေးငှား နိုင် မလဲ လို့ ဗျာ..စကားမစပ် ပြောပါတယ်…စိတ်ဝင်စားရင် …www.ဘာညာကွိကွ ကို ချိတ် လိုက် နော်…
ကဲကဲ လေကြော ရှည် နေလို့ မဖြစ်ဘူး…ဟိုဘက် က ကိုရင် ရာမည က လည်း ဒေါ်ကြီးလုံ ကို ဒီည ကြိုးစား မယ် လို့ ပြောသွား တယ်..မဖြစ်ဘူး နောက်မကျ အောင်..သူ့ထက် ဦး အောင် မဟာ တဲ့ နော်…လာ ထား ..ဒေါ်ကြီးလုံ ရေ ဘုရားသာ
တ ထား ပေတော့…
ကဲ…မဟာ ရဲ့ ရွှေဥာဏ်တော် ကွန့် ဘယ်လို စူးစမ်း ပြီး အိမ် တွေ ကို ဘယ်လို တက်မွှေ သလဲ ဆိုတာ…ဖြောင့်ချက်ပေး အဲ လေ…ရှင်းလင်း တင်ပြပါတော့ မယ် …
ကဗျာပြခန်း (၉) ၏ ကဗျာဆရာများ..ရှာပုံတော်..
ကဲ တစ် က စ လိုက် ရအောင်… တစ် က ဘလန့် ဗျ….. ဒါ ..ပညာ စမ်း တာ လေ ကျုပ်တို့ က သိပ်ကြိုက် ပေါ့…မဟာ တို့ များ လျှော် ချက်တော့ ..ဗုတ်တာ က (၁၁) ပုဒ် တင်ထား တာ က (၁၂) ပုဒ် အဲဒီ မှာစပြီး ရွာ လည် တိုင်ပတ် တာ ပါဘဲ…
ဒေါ်ကြီးလုံ အိမ် ထဲ အပေါ်တက်လိုက် အောက် ဆင်း လိုက် နဲ့..ပျောက်နေတဲ့ ကဗျာ ကို ရှာ လိုက် ရတာ..အချိန် တော်တော် ကုန်သွား တယ် ဗျာ.. ကျုပ် က ပြောင်းပြန် သမား ဗျ..သူများ တွေ အလွယ် ဆို ..ခေါင်းမီးတောင် လောက်အောင် ခက်တတ်တာ ကလား…
အခု တွေ့မယ့် တွေ့ တော့ လည်း..ဒေါ်ကြီးလုံ က လူကြီး စာရိတ္တ ဖြူစင်သူမို့ ဘုရားစင်ရှေ့ငုတ် တုတ် ထိုင်ခိုင်း ထား တာ ဘွားဘွား ကြီး တွေ့ပါ ရော လား…
ဘယ်သူ မှတ် တုန်း ဗျ…ဖိုးသူတော်ဦးမင်း လေ..ကျုပ် က ဘုရားစင် နား ထိုင်ခိုင်း ထားမယ် မှ မထင်ပဲ ကိုး ဗျ.. အဲဒီတော့ ထင်တဲ့ နေရာ တွေ လိုက်ရှာ တာေ ပါ့..မတွေ့ဘူး လေ…ဘယ် နား ရှာ လဲ မေး နဲ့ .နော် ….ပြောဘူး ဗျ..
ကဲ ..နှစ် ..လိုက် ကြ ရအောင်…
၂။သူ့ကလောင်နာမည်လေး ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံက ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပါတဲ့။ ဟီးဟီး ဒါ မျိုး တော့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေး ဗျာ…ကျုပ် က ပထမ ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသား တွေ သွား မြင် လိုက်သေး တာ…အဲဒါ နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ ကို ဂျင်မီ တို့ ကို ဖုန်းဆက် မေး ရတာ ပေ့ါ…ဒေါ်ကြီးလုံ အိမ် ရောက်ဘူး လား ပေါ့… သူတို့ ကလည်း ဖြေပါတယ် ဒေါ်ကြီးလုံ မသိဘူး နော်အုံးလှ ပဲ သိတယ် တဲ့ အဲဒါ နဲ့ လမ်း ကြောင်း က လွဲ နေပါ ပေါ့ လား…နောက် မှ (လျှောက်လှမ်းသွားမယ်..) ဆိုတာ အငြိမ် မနေနိင်တဲ့ သူ ဂဏာ မငြိမ် တဲ့ သူ. လို့ ဆိုလိုတာ ကိုး ဗျ…တစ်နေရာတည်း မှာ သူ အကြာကြီး မနေနိုင်ဘူး လေ…ဒီတော့ သူ အမြဲသွား နေရပြီ ပေါ့..ဘယ်သူ ဖြစ်မယ် ထင်သလဲ… ကျုပ် ကတော့ ကျုပ် ကို ဟင့်ထ် ပေးဘူး တဲ့ လွယ်အိတ်ကြီး တစ်လုံးလွယ် ထီးကောက်ကြီး ဆောင်း တစ်သွားတည်း သွား နေတဲ့ ကို.ခရီးသည်ကြီး ကို ဖေါ်လိုက်ပါတယ် လေ….
ကဲ သုံး လိုက် ရအောင် လား
၃။ မြန်မာအက္ခရာ နောက်ဆုံးစာလုံးနဲ့စပြီး တတိယစာလုံးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးတည်း နာမည်ပိုင်ရှင် .ကျုပ် က ဗေဒင် ဆိုလည်း သူများ အားမကိုးဘူး ဗျာ..ကိုယ့်ဘာသာ ဘုတ်တိုင် ထူ ပြီး တွက် တာ လေ…ကိုယ့် အကြောင်း ကိုယ် တွက် တာ မို့ လား မသိဘူး ဗျာ အကုန်ကွက်တိ မှန် သဗျ… မယုံမရှိ ကြပါနဲ့….ကျုပ် ဟော ချက် ထုတ် လိုက်တဲ့ ကိုယ့် အကြောင်း ….. အတိတ် က ဟာ တွေ ဒက်ထိ မှန် တယ် ဗျ… အနာဂါတ် ကတော့ မရောက်လာသေး လို့ မှန် / မမှန် မပြောနိုင်ဘူး….ဆိုလိုတာ ကလေ..ကျုပ် မြန်မာ အက္ခရာ တွေ နဲ့ လုပ်စား တတ်ပါတယ် လို့..အဲဒါ ကြောင့် ပဟေဠိ ကို ညှိ လိုက် တာ အင်ဇာဂီ ဆိုပြီး ပထမ အနီးဆုံး လူ ဆွဲစိ လိုက်တယ်…စာလုံး နှစ်လုံတည်း ဆိုလို့ မဟုတ်မှန်းသိတယ် လေ…ဒါပေမယ့် တရားခံ အစစ် က မမိသေးဘူးလေ..ဒီတော့ ရတဲ့ လူ ဆွဲစိ ရတာ ပါ.. နောက် မှ ရွာ ထဲ ပတ်မွှေ လိုက် တာ.ဂျီးတော် ကေဇီ အိမ် နံပါတ် (၆) မှာ တကယ့် တရားခံ ကို မပုတင် အစစ် နဲ့ သွားမိတယ် ဗျာ..အထာမကျ တဲ့..ကို အာဂ ပေါ့…
၄။ ကဗျာပြခန်းတာဝန်ခံတစ်ယောက်နဲ့ နာမည်ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့သူ …ခက်လိုက် တာ ကျုပ် က ဘယ်သူ တွေ ပြခန်း တာဝန်ခံ မှန်း မသိဘူး..အဲဒီ တော့ ..အဲဒီ ပြခန်းစောင့် ဆိုတာတွေ ကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း ရှာလိုက်ရတာ.. ဒေါ်ကြီးလုံ ရဲ့ အိမ်နံပါတ် (၉) မှာ တွေ့ပါ ဗျာ..တဂျားမင်း ၊ ဒညင်းဝက် ၊ ဂျီးတော် ကေဇီ ၊ မွန်မွန် ၊ သူကလေး …ဟော သူတို့ နဲ့ ဆင်ဆင် တူ တဲ့ သူ တဲ့ …ရှာလိုက်ရတာ ဗျာ..မာဃ ဆို ခင်ခ ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် အကြိုက် မတွေ့ဘူး ခင်ခ ဆို တာ ရာသီစာ ရောင်း စား အသက်မွေး နေရတာ လေ..သူ့အတွက် နေရာ ရှိပြီး သား…အဲဒါ နဲ့ ရွာ ထဲ တစ်ခေါက် ပတ် ရပြန်ပါ ပေါ့ လား..ဟော ဖေါ်ကောင် အိမ်နံပါတ် (၇) ပိုင်ရှင် ဂျီးတော်ကေဇီ က အလင်းဆက် ရဲ့ အိမ်နံပါတ် (၆) မှာ ရှိတယ် တဲ့ .. အဲဒါ တွေ့ပါ ဗျာ.. လူကလေး က ဘာ လုပ် ရမလဲ တဲ့..ဒညင်းဝက် က ဘာ မှ ခိုင်းမထား ဘူး ထင်ရဲ့…. သူကလေး နဲ့ ဆင်ဆင်တူ တဲ့ လူကလေး ကိုနာမည် ဆင်တူရိုးမှား ပုံမှားရိုက် တဲ့ ပုဒ်မ ..( ) နဲ့ ကုပ် လာ ခဲ့ တယ်..ပုဒ်မ နံပါတ် .ဒေါ်.ကြီးလုံ တပ်ပေး လိုက်နော်….
၅။ ရွာပြင်ဇနပုဒ် မီးမှိန်မှိန်လေးမှာနေတဲ့ ရာသီစာ ရောင်းသူတစ်ယောက် ပြောပြီး ပါပေါ့…ဒီတစ်ယောက် က ရွာပြင် မှာ ရာသီစာ ရောင်း နေတာ လေ..သူကိုယ်တိုင် ကို က ပြောဘူးပါတယ်.. ပို့စ် တွေ ကနေ အနားယူ ပင်စင် ယူကောင်း ယူနိုင်ပေမယ့် ရာသီစာ ကဗျာ တွေ ဆက်ရေး ပေးနေဦး မယ် တဲ့… နောက် ဒေါ်ကြီးလုံ က အိမ်နံပါတ်(၄) မှာ ဒီလို (××♦♦♦ ရာသီစာပို့လာသူကတော့… (အဲ..မခိုင်ဇာနဲ့ ရောကုန်ပြီ..) ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လအကြောင်းကို သရုပ်ဖော်တဲ့သူကတော့ သရီးကေ (ခေါ်) လေးလေးခင်ခပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ရွာပြင်ဇနပုဒ် မီးမှိန်မှိန်လေးမှာ မဒမ်တစ်ယောက်တည်းတော့ ချန်မထားခဲ့ဘူး ထင်ပါတယ်နော်… (ဇွန်လရောက်ပြီမို့ – ခင်ခ) ခင်ခ ပေါ့ နော်…ဒီလို ကြီး ဒေါ်ကြီးလုံ အတိတ် တုန်း က ဖေါ်ထား တာ ကို ..အရိုးတွန် လို့ အမှုမှန်ပေါ်တယ် ပဲ သဘောထား လိုက် ပါ …ရင်နာ မပြ နဲ့ ကို ခင်ခ…
၆။ အဖနိုင်ငံရဲ့ နာမည်နဲ့ လူတစ်ယောက် လွယ်လွန်း လို့ ခက် နေပါ ပေါ့ လား…ဒီ လူ ကို တော့ အသာလေး ရှာ နိုင်ပါ သဗျာ… အိမ်မှာ မတွေ့ လို့… သွားတတ် တဲ့ နေရာ…ဘီယာ ဆိုင် မှာ မြန်မာ ဘီယာ ရောင်းရင်း ကစ်ရင်း လုပ်နေတဲ့ မဟာမြန်မာ ကို ရွှေဝေါတော် နဲ့ ပင့်ခေါ် လာ သဗျ…( ဒီ လူတော့ ကြောက်သဗျ..ပေါက်ကရ သိပ်လုပ် တတ် လို့ )..
၇။ ကဗျာရေးတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ ဓါတ်ပုံဆရာ နာမည် ကြီး တွေ ကအများ ကြီး လေ..၀ဏ္ဏခွါနီး တို့ ဘာတို့ ညာတို့ ပေါ့…အဲဒါ ကလည်း ခက်သပေါ့..ကျုပ် က လူတွေ မသိဘူး လေ..ဒါကြောင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ပြန် မွှေ ရတာပါ့..ဘယ်သူ များ ကင်မရာ အိတ် လွယ်ထား သလဲ ဆို တာ ကိုရင်စည်သူ ~ကိုရဲစည် ~ကိုအောင်မိုးသူ ~
ကိုမိုဘိုင်း ~ကိုမင်းမင်း ~အံစာတုံး ..ကိုသုဝေ…ကိုကော်ဘရာ ….. ကိုရင်မောင် တို့ကို သွားလေရာ သူခိုး မျက်စိ နဲ့ လိုက်ချောင်း တာ .. တွေ့ပါပြီ ကင်မရာ တကားကား ကိုင် ဘရန်ဒီ နဲ့ ကိုဆန်နီ လေ ဘယ်သူ့အိမ်မှာ မိ လည်း ဆိုတာ ပြန်ရှာ တာ မမှတ်မိ တော့ဘူး ဗျာ.. ကျုပ်ကလည်း လူသစ် ဆိုတော့ လူ တွေ အိမ်တွေ မမှတ် နိုင်သေးဘူး….အော် တွေ့ပါပြီ..ဂျီးတော် ကေဇီ အိမ်နံပါတ် (၇) ထဲ မှာ..ဒါကြောင့် ဒီလူ ဒီနာမည် ရင်းနှီး ပါတယ် လို့ ပစ္စည်း တွေ ပြတ် လမ်းစရိတ် ခန်း လို့ ကင်မရာ အပေါင် ထားသွားတဲ့ သူ.. ဘရန်ဒီ တမြမြ နဲ့ ကိုဆန်နီ ခင်ဗျ..
၈။ ဖုန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ နာမည် (ဧည့်သည်ကဗျာဆရာ) ဖုန်း ကလည်း မြန်မာ က မထုတ် နိုင်သေး ဘူး..ဒါကြောင့် ရွာ ထဲ ရောက် နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တွေ ကို မျက်စေ့ဒေါက်ထောက် ရှာ လိုက် တာ မှာ Sorrow Weaver ၊ Wow ၊ Black Chaw ၊ Surmi ၊ Kyi Lwin ၊ Nora တို့ ကို မသကာင်္ လို့ လ၀က ယူနီဖောင်း ခဏ သွားငှား ပြီး ရုပ်တည် နဲ့ ပတ်ချပို့ တွေ စစ် လိုက် တာ.. Myammar တဲ့ ဗျာ… ဒီကလည်း ဘာရမလဲ မဟာ ပဲလေ…အကုန် ချွတ်ရှာ အဲလေ…ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း တွေ ကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်း လိုက် တာ…မှာ အိမ်နံပါတ် (၂) မှာ အဝေးကြီး အဝေးကြီး ဆိုပြီး ဖုန်း တွေ မားကက်တင်း လုပ်နေတဲ့ အပျိုကညာ Nora ကို တွေ့မိလိုက်ကြောင်း ပါ ခင်ဗျာ..
၉။ သူ့နာမည်ရဲ့ အသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်ရင် It is difficult တဲ့ (ဧည့်သည်ကဗျာဆရာ) It is difficult ဆိုတာ ခက်ပြီ လို့ ပြောတာ လေ…ဒီကဗျာ ဆရာ က ဂျီတော် ကေဇီ အိမ် နံပါတ် (၇) မှာ ရင်းနှီး ပြီးသား မို့ တန်းသွား လိုက် တာ ကွက်တိ တွေ့ပါ ဗျာ….မျက်ရည် တအီအီ နဲ့ ခက်သီ လေ…
၁၀။ ရွာလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇကာတင်ပါတဲ့ ပို့စ်ထဲက မင်းသား အတော် ခက် တဲ့ ပဟေဠိ ဆိုတာ ၀န်ခံပါရစေ… ဇကာတင် တွေ မွှေနှောက် လိုက် တာ … ဒီလေး ယောက် ထွက်လာတယ်..သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ပေါ့…သံသယ တစ်ထွေး နဲ့ ဖမ်း လာရတယ် လေ…ဇော်သန့်၊ အံစာတုံး၊ ဦးကျောက်ခဲ၊ ဦးမာဃ၊ ဒီ လေးယောက ကို ရွေးရမှာ ပါ ။ ဒေါ်ကေဇီ က သူ့ ပို့စ် မှာ ရေးဘူး တယ် တဲ့.. အဲဒီတော့ အိမ်အမှတ် (၃) နဲ့ (၇) မှာ ..၀င် မွှေ လိုက်တာ…အံစာတုံး ၊တဂျား မင်း နှစ်ယောက် ပဲ ကဗျာ ပါဘူး တယ်….ဒီတော့..မန့်တွေ ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အရ..အံစာတုံး ရဲ့ မန့် မတွေ့ဘူး…တဂျာမင်း မန့် ကတော့ အညင်ကပ်လောက်အောင် တွေ့ ရတယ်..သူက ပြခန်း စောင့် ပေကို…အဲဒီ တော့ .ကျုပ် ဒီ အချိန် မှာ ပျောက်ဆုံး နေတဲ့ ကိုအံစာတုံး ကို ဖမ်း ပေး ဖို့..သဂျီး ဆီ တင်ပြီး မွန်မွန် ဆီ ဆက်သပါ့ မယ် ခင်ဗျာ..
၁၁။ ပြခန်း (၆) တုန်းက နာမည်ကြီးသွားတဲ့ မင်းသား အဲဒါ နဲ့ အိမ်နံပါတ် (၆) ပိုင်ရှင် ဒညင်းဝက် အိမ် ကို တရားရုံး က၀ရမ်းတောင်း ပြီး တဂျီး သက်သေခေါ် ၀င် ရှာ လိုက် တာ…တစ်အိမ် လုံး ၀ုန်းဒိုင်း ကျဲ သောင်းကျန်း နေတဲ့ .မိုးမင်းသား ကို ဖမ်း ပြီး ဒေါ်ကြီးလုံ လက်ထဲ အပ် ဖို့ အသွား …ခလုတ် တစ်ချက် တိုက် လို့ မိုးမင်းသား ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွား ပါရော လား..အဲဒါ နဲ့ နီးစပ်ရာ တစ်ယောက် ကို အမြန် ဆွဲ ဖမ်း လိုက်တာ..ကို မင်းဇာနည် ကို မိလာ တယ် ဗျာ..သူက ပြီးခဲ့တဲ့ ကဗျာ ပြခန်း မှာ သူ့ကဗျာ မပါသေးလို့ တင်း နေတာ လေ.. (၇) မှာ လည်း မပါ (၈) မှာ လည်း မပါ မို့..ရွာထဲ သောင်းကျန်းနေတာနဲ့ ဆွဲ စိပစ် လိုက်တယ် ဗျာ…
၁၂။ အစက်အပြောက်မဟုတ်ဘဲ ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒန်ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ကိုတော့ ဝေးဝေး သွားရှာစရာ မလိုပါဘူး ဗျာ…သူ့ကိုယ်သူ ဘာ တဲ့ အောင်ရဲလင်း နဲ့ နင်လား ငါ လား ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သုဝေ ဆေးကုတာ ခံချင် တဲ့ ကို ဒညင်းဝက် ခေါ် အလင်းဆက် ပါ…
ကဲ ကျုပ် ကတော့ ..ပညာ မကုန် သေး ပါဘူး… လျှိုထား တဲ့ ပညာ တွေ ..ဘယ်ညာ အိပ်ကပ် မှာအပြည့်ရှိပါသေး တယ်… တစ်ခု ခြင်း ရောင်းစား ပေါင်စား နေတာ ပါ…
ကဲကဲ စာရင်း ချုပ် လိုက်တော့ ဒီ လို … ရ လာ တာပေါ့ နော်.. မှန် / မမှန် က တော့ ..သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များ က ဆုံးဖြတ် ပေးပါလိမ့် မယ်….
ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့် မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ…
ငါမပို့တဲ့ ကဗျာကို မရွေးဒဲ့အပြင် ပို့စ်မှာလည်း ထည့်မရေးဒေါ့ ငါဂ လူမဟုတ်တဲ့ ကြောင်လားကွ ဟက်ပလုပ်မြန်မာရ… တောက်စ် ခွီး.. မီညောင် ဂရား…
ဟင် ကို ကြောင် ဘယ်သူ့ ကို တင်း နေတာ လဲ …လဲ ..ဟင်င်င်င်..
မပို့တဲ့ ကဗျာ ကို မရွေး တာ ..တင်း သင့် တယ် ဗျာ..ဒီလို ခွဲခြား ခွဲခြား
လုပ် လို့ ကျုပ်တို့ ရွာ မတိုး တက် တာ.. အဲဒါ အပြင် ..ပို့စ် မှာ ပါ ထည့် မရေး တဲ့
လူ တွေ ကို ပါ စိတ်ဆိုး သင့် ပေါ မပေါ့…
ကျုပ် ကပဲ တောင်းပန်သမှုပြု တဲ့ အနေ နဲ့..နောက် တစ်ခေါက် ပို့စ် တွေ မှာ
ကြောင် အကြောင်း ကြောင်ရာသီ ရေး ပေး ပါ့ မယ်…
အခု တော်သလင်း မကုန် သေး ဘူး မဟုတ် လား မှီပါသေး တယ် ဗျ…
သတ်ပုံ ပြင်နည်း လေး ..Edit လုပ်နည်း လေး ပေးကြ ညွှန်း ကြပါဦး ခင်ဗျာ..
ထပ်ကာထပ်ကာ စစ် တာ တောင် အမှားက မကင်း ချင်ဘူး..
အမှားတစ်ခု တွေ့တယ် မဟာ။
ကျန်တာ ပြီးမှ ဆက်ရှာဦးမယ်။
အချက် ၂။ မှာ စာကြောင်း (၇) ၊နောက်ဆုံး ဒုတိယစာကြောင်း မှာ လွယ်အိတ်ကြီး ကို လွယ်အျတ်ကြီး အမှား ဖြစ် နေတာ ပါ….
ပြင် လို့ ရရင် လည်း တစ်ခါ တည်း ပြင်ပေး ပါဗျာ…
ကြည့်မရ လို့ ပါ…
အဲလာ သတ်ပုံအဖွဲ့က ဒေါ်ကြီးလုံးစစ်လိမ့်မယ်။
ကဗျာ ဆရာနာမည်မှားနေတာကိုပြောတာ။ မှန်းတာ မှားနေတာ။
ကျွန်တော် က လည်း တစ်လွဲ ပါ ဆို..
ကေဇီ တင် လွဲ မှတ် နေသလား…
​သေ​သေချာချာဖတ်​ကြည့်​မှ ကဗျာဆရာဘဲ ​ဖော်​ခိုင်းတာဖြစ်​​နေပါတယ်​ ။
ကျွန်​​တော်​ အမှတ်​မှားပြီး ကဗျာ​တွေလိုက်​ရှာမိတာ ​မောလိုက်​တာဗျာ
ကိုရင်​မြန်​မာ အလွန်​မျက်​စိစူးပါ​ပေတယ်​ ….
ကျွန်​​တော်​ ​တွေးမရလို့ ထားခဲ့တာ​လေး​တွေကို ရှာ​ဖွေနိုင်​တာ မဟုတ်​မှလွဲ​ရော …
အ​လေ့အကျင့်​အလွန်​များပြီး လက်​ယဉ်​​နေသူတစ်​ဦးဆိုတာ မ​ပြောလည်းသိပါတယ်​ ကိုမဟာခင်​ဗျာ ။
လွန်​စွာ ​လေးစားမိပါတယ်​ခင်​ဗျာ ….
​မြွေအခြင်းခြင်း​တော့ ဘယ်​လို ရှူရှူး​ပေါက်​တယ်​ဆိုတာ သိ​နေပါတယ်​
အိုင်ဆေး အိုင်ပီ ရ…
ချီးကျူး မစော နဲ့ ဦး လေ…
အိုင်ပီ့ လူ ကိုမြင်ကျော် က မှ ၈ ယောက် မှန် သေး
ကျုပ် က ၆. ယောက် ပဲ မှန် သတဲ့ ဗျ…
ကိုရင် ရာမည နိုင်ပါတယ် ဗျ…
နှစ်ခု ပေါင်း လိုက်ရင် ..အကုန် မှန် နေမှာ ပါ…
မွန်မွန် ရေ ကိုရင် ရာမည ကို အနိုင်ပေး ပါတယ်..
အခု ထပ်ဖြေတာကတော့ …
အကျုံး မ၀င် တော့ပါဘူး…
၇။ ကိုပေါက် (မန်းလေး)
ဟီးဟီး ဒီ လို ပြင် ကြည့်တယ် ဗျာ…
မွန်မွန် ဘယ်နှစ်ခု မှန် လဲ ဟေ့…
တကယ်​ဆိုရင်​ အမြည်းဘဲလိုတယ်​ …
ကျွန်​​တော့်​ ရွာထဲ​ဝင်​ဖတ်​​နေတာ လုပ်​သက်​ရင့်​​နေလို့ပါကိုမဟာခင်​ဗျာ ….
လူ​တွေ ..အထာ​တွေ … ​ရေးဟန်​​တွေ မှတ်​မိ​နေလို့ပါ
ကျွန်​​တော်​​တွေးမရတာကိုေ ဖ်ာနိုင်​တာကိုက​ အားကျအတုယူမိတယ်​ခင်​ဗျ
မှန်တဲ့အခါလည်း မှန်ပေ မပေါ့
မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ ။
အချိန် ရှိပါသေးတယ် ခည
ကိုရင်ရာမည က ကျွန်တော့ ထက် စော တော့ နာမည် တွေ ရေးဟန် တွေ
သိနိုင်တာ အားသာ ချက် ပါ… ကျွန်တော် လည်း အခု မှ မွှေ လိုက် ဖတ် လိုက်ရတာ..
အကုန် နီးနီး ပဲ.. နာမည် တွေ စု လိုက်ရတာ..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..ပို ပြီး အသိ တိုး သပေါ့ ဗျာ…
အပြိုင် လေး နဲ့ ဖေါ် ရတာ ပို ကောင်း ပါတယ်..
အတွေ့ အကြုံ ဆို တာ ..လိုက်မမှီ နိုင်တဲ့ အရာ ပါ ..
ကဲကဲ ဟင့်ထ် တစ်ခု ပေးဦး မယ်..
အားလုံး မှန် လိုချင်ရင် တတိယ လူ ..
မဟာ နဲ့ ရာမည နှစ်ယောက် ပေါင်း လိုက်..
အဖြေ ထွက်သလောက် ပဲ…
ဟီးဟီး.. ( မဟာ ရဲ့ လျို့ဝှက်နည်း )
နာ့ကို မွဲဆေးပြန်ဖော်သဟ… ကိုရင်ဘီယာရေ… နာမည်တွေပြောင်းလိုက်တဲ့ စဉ်းစားပုံလေး ပြောပြပါလား..အတော်များများတော့မှန်လာပြီ… တကယ်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးကို အမှတ်တရပေးချင်တာ.. ဟီး.. တတိယလူ ဖြေဦးမှာလားဟင်င်..မဖြေတော့ရင် နက်ဖန်လောက် ပို့စ်တင်ပေးမယ်…
အတိအကျ ဘယ်နှစ်ခု မှန် သလဲ ဗျ..
အဲဒါ ဆို ပြောင်းလဲ ဖြေဆိုပုံ ပြောပေး မယ် လေ
ငှီး ငှီး..နှစ်ဦး လုံး ကို အမှတ်တရ ပေး ရင် ယူမှာ နော်..
ကို ပေါက် ထက် ..ကိုအင်ဇာဂီ က ပိုမှန် လ်ိမ့် မယ် ဗျ…
အဲဒါ တော့ မတွေးဘူး ကိုရင်ရာမည ဆီ က..ယူတာ လေ..
်ကျွန်​​တော်​က ဆန်​နီကို ဆိုနီ နဲ့မှား​နေတာပဲ ….
ထက်​​ဝေး ဆိုတာ​တော့ ထင်​မိ​သေးတယ်​ ….
မ​ရေးဖြစ်​တာ ။ စံပယ်​မျှားခြင်းကို ထက်​​ဝေးလို့ မှတ်​​နေမိတာ။
ကိုကမ်း ဝေး က အမှတ်(၇) မှာ ရင်းနှီး ဘူးတယ်…ဒေါ်ကေဇီ က သူ့ဆီ မှာ ပါဘူး တယ် တဲ့..
အခန်း(၉) မန့် မှာ တွေ့ လိုက်တယ် လေ…ဆန်နီ လည်း ပါတယ် …
ဆိုနီ ကတော့ မရှိပါဘူး…
ဘယ်သူ ဘယ်နှခု မှန်လဲ ဆိုတာတော့
ကိုရင့် ဖော်ထုတ်ပုံကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး
ကျုပ် အတော် အားရမိသဗျ
တဂျားမင်း ရေ ..ကိုရင် ရာမည ကို မနိုင်ဘူး ဗျ…
သူ က ..အကူ လူ ခေါ်တယ်..လူစွန့်စား မြင့်ကျော် ကို
သွား မေး တယ်… ၀မ်း ဘိုင်ဝမ်း ပြိုင် နေချိ်န် မှာ အခု လို
တူး ဘိုင် ၀မ်း ကတော့… မဖြစ်သင့်ဘူး လေ…အဟင့်..ရွှတ်…
စိတ် နာတယ်..အဲသည် လို မှန်း သိ …လုံမလေး မွန်မွန် ဆီ..အကူအညီ
အတွေကောင်း အရေးကောင်း ပါဗျ။